China Precision Bearing Light type Slewing Bearing without gear စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Wanda
ဂီယာမပါတဲ့ Precision Bearing Light အမျိုးအစား Slewing Bearing ပါ။
1. Slewing Bearing အမည်ရှိ Slewing ring၊ Slewing ring Bearing၊ Swing Bearing၊
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် Slewing bearing မျက်နှာပြင်နှင့် သွားများကို ကုသပေးနိုင်ပါသည်။
3. OEM ရရှိနိုင်ပါသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံသည် 12 လဖြစ်သည်။
5. ISO9001: 2015၊ CCS၊ SGS နှင့် အခြားသော ပါတီသုံးဆယ် စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ရနိုင်သည်
Xuzhou Wanda သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Slewing Bearing ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကြီးမားသော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီး နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမှုသည် 68000pcs၊ အရွယ်အစားအကွာအဝေး 150mm မှ 5000mm၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် အပင်3ခု ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာများ တပ်ဆင်ထားပြီး သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများရှိသည်။
Xuzhou Wanda Slewing Bearing ၏ထုတ်ကုန်များသည် တိကျမှု၊ တာရှည်ခံမှုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြီးပြည့်စုံသော အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုစနစ်ရှိပြီး ဖောက်သည်များအတွက် အရောင်းအပြီးပြဿနာများကို တက်ကြွစွာဖြေရှင်းပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဖောက်သည်များ၏ ပုံကြမ်းများအတိုင်း ပုံဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များ၏နမူနာများအလိုက် တိုင်းတာခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ဖောက်သည်များကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပုံများကို ပေးနိုင်သည်။
Slewing Bearing ကို အမျိုးမျိုးသော အဏ္ဏဝါစက်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ထရပ်ကားကရိန်း၊ နေရောင်ခြည်သုံး ခြေရာခံခြင်း၊ ဝေဟင်လုပ်ငန်း၊ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းစသည်တို့တွင် အသုံးများသည်။
အမျိုးအစားကွဲပြားသော လှည့်ပတ်မောင်းနှင်မှု၊ တစ်ခုတည်းသောပိုး၊ သန်ကောင်နှစ်ခု၊ helical ဂီယာနှင့် သန်ကောင်ဂီယာတို့ကိုလည်း ပေးထားသည်။
တောင်းဆိုမှုများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အား လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်ပါ။
ယခင်- အစားအစာစက်ပစ္စည်းအတွက် ပြင်ပဂီယာပါသော အပေါ့စား Slewing Bearing (WD-061)
နောက်တစ်ခု: Nucleic acid ပစ္စည်းများအတွက် မြင့်မားသောတိကျစွာ လျှောလက်စွပ် အသီးအနှံ
ပြင်ပဂီယာ slewing bearing
Light type slewing bearing အမျိုးအစား
ပေါ့ပါးသော slewing bearing
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း4point angular contact ball turntab...
ပြင်ပဂီယာ single row ball လေးပွိုင့် contac...
XZWD WD-060 စီးရီး အစားထိုး VLI စီးရီးအလင်း...